Birgitta Olhsson oo Ilhaan Mohamed jama Ku soo dhoweysay Baarlamaanka Sweden | Saraarnews
Birgitta Olhsson oo Ilhaan Mohamed jama Ku soo dhoweysay Baarlamaanka Sweden
Sweden(saraarnews)Kulan maanta ku dhexmaray Xarunta Baarlamaanka wadanka sweden Marwo ilhaan Mohamed Jama iyo Birgitta Olhsson oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka wadanka Sweden ayaa la iskula soo qaaday Xidhiidhka somaliland iyo Dowlada Sweden.
Marwo Ilhaan oo halkaa hadal kooban ka jeedisay ayaa Mudanaha uga xog warantay xaalada Wadanka Somaliland iyo waxyaabahii ugu danbeeyey ee ka soo kordhay doorashoyinka la filayo inay wadanka ka qabsoomaan. waxayna ay ka codsatay inay dawlada Sweden labanlaabaan taageerada ay somaliland ka siiyaan dhinacyada Horumarinta dimoqraadiyada iyo Caawimooyinka kale ee wadanku u baahan yahay.
Mudane Birgitta Olhsson oo iyana halkaa ku soo dhoweysay ayaa sheegtay inay aad ula socoto xaalada wadanka somaliland , waxayna u rajaysay in doorashooyinka la filayaa u qabsoomaan si wanaagsan, iyadoo ay tahay waxyaabaha caalamku ku qiimaynayo somaliland. intaa ka dib waxay marwo ilhaan ku soo wareegtay qaybaha kala duwan ee Xarunta Baarlamaanka wadanka sweden. Marwo Ilhaan ayaa intii ay joogtay magaalada Stockholm waxa kale oo ay maanta Kulan la yeelatay Madaxda Sare ee SILC oo ugu Horeeyo Secretary General Martin Ängeby iyo Programe Officer Amanda Lövkvist oo Madaxa hay’adaas ah . waxayna uga xogwarantay inay Si weyn ugu baahan yihiin Haweenka somaliland in laga caawiyo sidii ay uga mid noqon lahaayeen Hogaaminta wadanka. Waxa kale oo ay ka jawaabtay Su’aalo laga waydiiyey Sababtii Madaxweyne Riyaale isaga Hortaagay inay ka mid noqoto Gudiga Doorashooyinka Qaranka.
Martin Ayaa sheegay inay Jeclaan lahaayeen in xubin haween ahi ka mid noqoto gudiga doorashooyinka qaranka, imikana ay diyaar la yihiin inay wax la qabtaan haweenka somaliland. Kulankaaas ayaa ku dhamaaday is afgarad.
Dhegayso: Waraysi lala Yeeshay Marwo Ilhaan Mohamed Jama
Gudoomiyaha Xisbiga KULMIYE oo Jawaabo waafiya ka bixiyey Su’aalo dadku soo waydiiyeen Idaacada VOA
Faallo: Muxuu Cismaan Hindi Ku Daboolayaa Ku Eedaynta Xisbiga Kulmiye “Al-Shabaab”? By ibrahim Hassan Gaagaale